Gaa na Britain UGBUA ma ọ bụrụ na a gbara gị ọgwụ. Onye isi oche ETOA Tom Jenkins na -ebu amụma mgbake njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Gaa na Britain UGBUA ma ọ bụrụ na a gbara gị ọgwụ. Onye isi oche ETOA Tom Jenkins na -ebu amụma mgbake njem
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ajụjụ Ọnụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
European Tourism Association (ETOA) na -anọchite anya akụkụ dị mkpa nke European Travel and Tourism Industry. Onye isi oche nke ETOA Tom Jenkins bụkwa dike njem nlegharị anya na Mmemme Onyinye Nleta Nleta World Tourism ma na-ekwu okwu mgbe niile n'oge nsogbu COVID-19.
UGBU a pụtara Ọgọst 2, 2021. WHO pụtara ndị ọbịa si United States na European Union - mana ọ bụghị ụmụ amaala France - agaghị enwe ike ịpụ iche mgbe ha na -aga England.
Iwu ọhụrụ a metụtara England, ndị ọchịchị kewapụrụ na Scotland na Wales kwuru na ha ga -agbaso.
ETOA Onye isi oche Tom Jenkins chere na nke a na -abịa obere oge maka England, mana ọ ga -enyere aka, ebe o nyeere ụfọdụ ebe EU aka ịmalite mgbake njem.
Gaa Britain ọzọ n'oge adịghị anya, mana ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị bụ onye France.
N'ịkwasa ọkwa nke gọọmentị UK ịhapụ ụmụ amaala European Union (EU) na United States ọgwụ mgbochi zuru oke ịbanye England na-enweghị mgbochi, Tom Jenkins, onye isi oche nke Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta nke Europe (ETOA) kwuru, sị:
“UK ahapụla oge imebi ịkwụsị ịtụ ihe mgbaru ọsọ ya. Pasent 80 nke nleta niile sitere na US na-eme n'etiti Jenụwarị-Septemba, nke oge kacha elu bụ Septemba, oge gburugburu ụbọchị ezumike ndị ọrụ US.
"EU gbakwunyere US na 'ndepụta ọcha' ya na June, ndị otu ETOA nwere ike ịchekwa akụkụ nke oge site na ire ngwugwu njem nlegharị anya inbound ka mba ndị EU akwadoro nye ndị America. "
Ọtụtụ ndị ọbịa America bịara na July, ọtụtụ ndị ọzọ ga -eme ya n'August. A haziri ihe niile maka oge njem ga -ekwe omume na Septemba na mpaghara Schengen. Na UK, usoro ntinye akwụkwọ pụtara na akagbuola August na Septemba. UK tụfuru oge ya dị elu na mbido July.
“A ga -enwe mgbake. Ịde blọgụ nke ikpeazụ ga-eme maka London. A ga -echekwa ụfọdụ azụmaahịa October. Mana nnubata nke ndị ọbịa America na -eme n'obodo na mpaghara EU agaghị eme na UK na 2021, "Jenkins kwukwara.
Na Septemba 2020, Tom Jenkins nyere nkọwa gbasara Steeti Njem nlegharị anya eTurboNews.